Posterior Pituitary tsindrona - China Ningbo Faharoa hormonina
Posterior Pituitary tsindrona Posterior Pituitary dia vokatra voajanahary rehetra-voaharoharo araka ny fitrandrahana avy amin'ny kisoa pituitary fihary. [Description] entana ity dia colorless mangarahara na saika rano mangarahara. [Andrakitra sy ny fampiasana] oxytocin ity dia ahitana vokatra sy ny pitressin. Oxytocin afaka manaitaitra uteruses fifantenana ka aoreno tsara ny Contraction ny trompes utérine dia mampitohy malama hozatra. Ny vokatry ny hozatra malefaka nahafinaritra trompes utérine dia mampitohy miovaova araka ny fatrany sy ny hormonina haavon'ny in Vivo. A kely levitra O ...
Posterior Pituitary dia ny rehetra-vokatra voajanahary voaharoharo araka ny fitrandrahana avy amin'ny kisoa pituitary fihary.
Ity vokatra dia colorless mangarahara na saika rano mangarahara.
Izany dia ahitana vokatra sy ny pitressin oxytocin. Oxytocin afaka manaitaitra uteruses fifantenana ka aoreno tsara ny Contraction ny trompes utérine dia mampitohy malama hozatra. Ny vokatry ny hozatra malefaka nahafinaritra trompes utérine dia mampitohy miovaova araka ny fatrany sy ny hormonina haavon'ny in Vivo. Ny kely levitra izany vokatra afaka mampitombo rhythmic contractions ny trompes utérine dia mampitohy hozatry amin'ny fanamiana sy ny fialam-boly Contraction nandritra ny faran'ny vohoka; fatrany lehibe ny vokatra dia hahatonga tetanic Contraction ny trompes utérine dia mampitohy hozatra malefaka sy tsindrio ny lalan-dra ao amin'ny myometrium mba hiezaka mafy hemostatic vokany. Ankoatra izany, dia afaka hampiroborobo ny oxytocin Contraction ny myoepithelial sela manodidina ny mammary acini sy mammary ducts, fanamoràna ny ejection ny ronono. Pitressin manana ny vokatry ny antidiuresis sy manandratra tosidra. Izany no tena ampiharina eo amin'ny:
1. Postpartum aretina ny ronono ejection, mammary mamontsina, ary fampiroboroboana lactation ho an'ny vehivavy vao nanolotra biby tsy fahampian'ny ronono; ronono azo nandroahana 1-4 ora aorian'ny tsindrona.
2. Manafaingana parturition sy ny odinopoeia.
3. Hemostasis ho an'ny omby 'hemorrhage goavana.
4. Postpartum trompes utérine dia mampitohy fandehanan-dra, ary nihazona fonontselan'ny foetus.
1. Postpartum aretina ny ronono ejection, mammary mamontsina, ary fampiroboroboana lactation ho an'ny vehivavy vao nanolotra biby tsy fahampian'ny ronono: tokana fatra ho an'ny intramuscular tsindrona: 20-40 vondrona ho an'ny soavaly sy ny omby matotra, indray mandeha isan'andro mandritra ny 3 andro misesy; 10-20 vondrona for matotra ondry sy kisoa, indray mandeha isan'andro mandritra ny 3 andro misesy; 5-10 vondrona ho an'ny alika, saka, amboahaolo, racoon-alika sy minks, indray mandeha isan'andro mandritra ny 3 andro misesy.
2. Manafaingana parturition sy odinopoeia: tokana fatra ho an'ny subcutaneous tsindrona na intramuscular tsindrona: 30-100 vondrona ho an'ny soavaly sy ny biby fiompy; 10-50 vondrona ho an'ny ondry sy kisoa; 2-10 vondrona ho an'ny alika; 2-5 vondrona ho an'ny saka.
3. Hemostasis ho an'ny omby 'goavana hemorrhage: intravenous tsindrona; 100-150 vondrona for tokana levitra (hanampy ho 500ml ny gliokaozy ny sodium klôro na tsindrona).
4. Postpartum trompes utérine dia mampitohy fandehanan-dra, ary nihazona foetus fonontselan'ny: iray ho an'ny subcutaneous levitra tsindrona na intramuscular tsindrona: 30-100 vondrona ho an'ny soavaly sy ny biby fiompy; 10-50 vondrona ho an'ny ondry sy kisoa; 2-10 vondrona ho an'ny alika; 2-5 vondrona ho an'ny saka.
1. Contraindicated akaiky ny fotoana ny asa ara-dalàna, amin'ny fiterahana Canal, foetus toerana ara-dalàna, nefa-to-misokatra cervixes.
2. Avo fatrany mety isam-ponina ny tosidra, oliguria fanaintainana sy ny kibo.
10 x 1ml: 10 vondrona
Shaded ary voatahiry ao amin'ny toerana maizina sy mangatsiaka (eo ambany ny mari-pana ny 20 ℃).
Previous: Pituitary Luteinizing hormonina noho ny tsindrona (LH)
Manaraka: Bevohoka Mare Serum chorionique ny tsindrona (PMSG)
Cloprostenol Sodium tsindrona (D karazana PG)